Fasan'i Oscar Wilde any Paris | Vaovao momba ny dia
Fitsangatsanganana sy mpizahatany | | Fialantsasatra any Eropa, General
El Fasana Pére Lachaise Io no iray amin'ny toerana be mpitsidika indrindra ao Paris, satria mifanentana amin'ny lazany ireo olo-malaza nalevina tao miaraka amin'ireo olo-malaza izay miala sasatra ao Pantheon. Iray amin'ireo mpilalao ireo ny poeta sy mpanoratra Irlandey malaza tamin'ny taonjato faha-XNUMX Oscar Wilde. Ary mendrika hitsidika azy ny fasany.
Vato vato 20-taonina no nokapaina hamoronana endrika manana elatra mitovy aminy ny sphinx manidina manidina miaraka amin'ny elany miitatra avo. Ny sary vongana dia miorina amin'ny tononkalon'i Wilde "The Sphinx." Fa misy zavatra nahatonga an'io tsangambato io ho malaza kokoa: ny oroka voamarika eo amin'ny vatam-pasana, tapakila karmine izay manome voninahitra azy miaraka amin'ny soratra hafa tampoka.
Ity lamaody ity dia nanomboka tamin'ny taona 90, miaraka amin'ny oroka voalohany tsy manantsiny eo am-pasana. Inona ny padlocks an'ny Tetezana Milvio any Roma, ny ohatra dia narahin'ny olona maro kokoa rehefa nisy nanapa-kevitra ny handao ny oroka lokomena amin'ny fasana. Fialam-boly kolo hafa eto an-drenivohitra frantsay, na dia voasazy onitra mafy aza.
Fa na dia manandrana inona aza ny manam-pahefana, tranga tsy azo sakanana io. Ny tasy lokomena mena dia niditra an-tsokosoko tao anaty vato ary saika tsy azo esorina raha tsy manimba ilay sarivongana.
Tamin'ny 2011, hankalazana ny faha-111 taonan'ny nahafatesan'i Oscar Wilde, niala ny fahefana sakana fitaratra manodidina ny fasana. Ankehitriny dia avelan'ny mpizahatany eo amin'ny vera ny orohany. Tsy afaka mametraka varavarana mankeny an-tsaha ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Fialantsasatra any Eropa » Fasan'i Oscar Wilde any Paris
Mandehana amin'ny sambo mankany New York avy any Eropa